OTU ESI EME KA RDP 7 NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Na-enyere RDP 7 aka na Windows 7
Ihe a na-akpọ OKI bụ ụzọ nkwụnye ego n'ime enyemaka Odnoklassniki netwọk mmekọrịta. Ha bụ ụdị ihe a na-ahụ maka ego. Iji OK, ị nwere ike ịdenye ọrụ dị iche iche ụgwọ, statuses na ọrụ maka akaụntụ gị, mee ngwa ngwa na Odnoklassniki egwuregwu online, ịzụta onyinye mara mma maka ndị ọrụ ndị ọzọ, ọnụego 5+ foto ndị enyi na ọtụtụ ndị ọzọ. N'ihe dị mkpa, akụ ahụ nwere ike ime ma ọ bụrụ na OK adịghị mma, mana gị na ha ga-eji oge gị na Odnoklassniki bụrụ ihe bara uru ma baa ọgaranya.
Anyị na-enweta OKi na Odnoklassniki
Ebee ka ị ga - eji OKI a? Enwere ike ịjụ ajụjụ a site na onye ọ bụla so na netwọk mmekọrịta. Enwere ọtụtụ nhọrọ, akwụ ụgwọ na n'efu.
Nhọrọ 1: Ịzụta OKs
Ndị mmepe netwọk Odnoklassniki na-enye ịzụta Oka. Enwere ike ime nke a ma na njirimara zuru oke nke saịtị ahụ na ngwa ngwa na-eji akara akụ, ekwentị, ịkwụ ụgwọ, ego kọmputa na ụzọ ndị ọzọ. Ntuziaka zuru ezu banyere otu esi emejupụta gị mebere ndekọ Odnoklassniki, gụọ isiokwu ị ga-aga na njikọ ahụ edepụtara n'okpuru ebe a.
Gụkwuo: Deposit na Odnoklassniki
Nhọrọ 2: Onye nchịkwa ndị mmadụ Odnoklassniki
Enwere ụzọ iji nweta ọrụ n'efu nke a na-ere maka OKI. Iji mee nke a, bụrụ onye na-edezi Odnoklassniki.
Anyị na-emeghe odnoklassniki.ru mkpokọta na ihe nchọgharị ahụ, na-aga site na ikike, n'okpuru foto isi anyị na kọlụm aka ekpe anyị na-ahụ ihe ahụ "Onye Nchịkwa OK".
Na mgbakwunye "Onye Nchịkwa OK" dị ka ụdị egwuregwu, a na-enye anyị ohere ịgụta foto na vidiyo, ịhapụ spam, erotica, ndị a ma ama na ọdịnaya na-ewe onye ọ bụla iwe. Iji malite, pịa bọtịnụ ahụ "Malite egwuregwu".
A na-enye gị ohere ile ihe oyiyi dị iche iche anya. Ikwesiri igosi akara onu ogugu na akuko, ma oburu na enweghi mmebi na foto ma obu uhie na ihe omuma Kwụsị ọ bụrụ na ọ bụ ọdịnaya na-ekwesịghị ekwesị.
Nweta ihe maka azịza ziri ezi wee pịa bọtịnụ ahụ "Nwongwo". N'ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịhapụ kpamkpam ijikọ ọrụ dị iche iche nke onye ọhaneze na-azụta maka OKI.
Nhọrọ nke 3: Onye na-anọchite anya obodo
Odnoklassniki ọtụtụ puku ndị na-achọ mmasị na ha na-achọkarị ndị nhazi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ụdị ọrụ ahụ agaghị esiri gị ike. Dịka na egwuregwu ahụ e kwuru n'elu, ị ga-elele ihe ndị edepụtara n'ime obodo site n'aka ndị òtù ya. Usoro a anaghị ewe oge dị ukwuu, ma ọ ga-emejupụta akaụntụ akaụntụ gị nke ọma na OK dị mma.
Ya mere, anyị maara ụzọ iwu iji nweta OKI. Na-ele anya na nlezianya - ọ bụrụ na ndị na-enweghị nghọta na Intanet na-enye gị ngwa maka ịkụzi OKs, mgbe ahụ ọ ga-abụ na ha bụ ndị omempụ. N'ihi omume ha, ị ga-atụfu ego ma agaghị enweta akwụkwọ ego Odnoklassniki. Nri anwụrụ n'efu bụ naanị na akwa akwa.
Hụkwa: Na-agbakwụnye enyi Odnoklassniki